မနျစီးတီးနဲ့တှဆေုံ့မယျ့ပှဲမှာ ဆိုးလျရှား ဘယျလိုဗြူဟာတှထေုတျသုံးပွီး ဘယျ သရဲနီတပျသားတှကေို ရှေးခယျြပှဲထုတျလာမလဲ…? – Premier League Special
ဒီနညေ့ အတှကျကတော့ အင်ျဂလနျမှာ ရငျလှိုကျသညျးဖို ပှဲစဉျတဈပှဲဖွဈလာပါမယျ။ ကာရာဘောငျဖလား ဆီမီးဖိုငျနယျပှဲစဉျက နောကျတဈဆငျ့တကျရဖို့ အရေးကွီးသလို၊ မနျခကျြစတာ ဒါဘီပှဲစဉျမှာ ဘယျအသငျးက အနိုငျယူနိုငျသလဲဆိုတဲ့ ဂုဏျသိက်ခာပိုငျးကလညျး ပိုလို့ အရေးကွီးပါတယျ။
ဖလားလကျမဲ့ ဖွဈနတော ကွာနပွေီဖွဈတဲ့၊ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဆီမီး အဆငျ့တှသောတကျရောကျနိုငျခဲ့တဲ့ ဆိုးလျရှား အတှကျ ဒီနညေ့ ပှဲစဉျက အရမျးကို အရေးကွီးနပေါတယျ။
ဆိုးလျရှား ရဲ့ တပျမဟာမှာတော့ ပွဈဒဏျခံနရေတဲ့ ကာဗာနီနဲ့ ကြောဒဏျရာရနတေဲ့လငျဒီလော့တို့ မပါဝငျနိုငျသလို ဂှာဒီယိုလာရဲ့ အသငျးဖကျမှာလညျး ကိုရိုနာ နှိပျစကျလို့ အသငျးသားတှေ အထိနာနရေပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လောလောဆယျ အနအေထားအရဆိုရငျတော့ ယူနိုကျတကျတို့ ကစားသမား အငျအားမှာ ရှေးခယျြစရာမြားစှာနဲ့ အားသာနပေါတယျ။
ဆိုးလျရှား ခငျးကငျြးနိုငျတဲ့ ခနျ့မှနျးကစားကှကျကတော့ 4-2-3-1 ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါဘီပှဲစဉျအတှကျ တိုကျပှဲဝငျနိုငျတဲ့ သရဲနီတှကေတော့ ဂိုးသမားနရောမှာ ဟနျဒါဆနျကို ခနျ့မှနျးကွပါတယျ။
တခွားတပျသားတှကေတော့ ဝမျဘဈဆာကာ၊ ဘိုငျလီ၊ မကျဂှားယား၊ လုချရှော၊ ဖရကျ၊ တျောမီနေး၊ ရှကျရျှဖို့၊ ဖာနနျဒကျဈ၊ ပေါ့ဘာ၊ မာရှယျတို့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
အခု ယူနိုကျတကျ နှငျ့ မနျစီးတီးတို့ ကာရာဘောငျဖလား တှဆေုံ့မှုဟာ (4) ကွိမျမွောကျဖွဈပွီး ၊ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ မနှဈဘောလုံးရာသီတုနျးက မနျစီးတီးအသငျးနှငျ့ Carabao Cup ဆီမီးဖိုငျနယျပှဲစဉျ တှငျ တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး ပကြော့ရလဒျမှာ 1ဂိုး -3ဂိုး ရလဒျနဲ့ ရှုံးပွီး၊ ဒုကြော့အခေါကျမှာတော့ တဈဂိုး ၊ ဂိုးမရှိ နဲ့ အနိုငျရခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ စုစုပေါငျး 3ဂိုး -2ဂိုးရလဒျ ကွောငျ့ ယူနိုကျတကျတို့ပွိုငျပှဲ ကနထှေကျခဲ့ရပါတယျ။ အခုနှဈ ကာရာဘောငျ ဖလား ဆီမီးဖိုငျနယျပှဲစဉျကို တော့ တဈကြော့သာယှဉျပွိုငျကစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ မနျစီးတီးအသငျးနှငျ့နောကျဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွိုငျပှဲစုံ(3)ပှဲတှငျ (2)ပှဲနိုငျပွီး (1)ပှဲသရကေခြဲ့ပါတယျ။
မနျစီးတီးအသငျးဟာ ဂှာဒီယိုလာလကျထကျ ကာရာဘောငျဖလားပှဲစဉျ ကစားခဲ့တဲ့ 23 ပှဲမှာ 2ပှဲသာ ရှုံးခဲ့ဖူးပွီး အဲဒီ2ပှဲကို ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့သာရှုံး ခဲ့တာပါ။ အခုအခြိနျမှာတော့ စပါးအသငျးက ဖိုငျနယျစငျမွငျ့ကို ကွို ရောကျနပေါပွီ။
နညျးပွဆိုးလျရှား အနနေဲ့ ခုတဈခေါကျ ဒါဘီပှဲစဉျကို ပွီးခဲ့တဲ့ တဈခေါကျလို ခဈြကွညျရေးပှဲအသှငျ ကိုငျတှယျမှာလား၊ လကျဝှကွေို့းဝိုငျးလို ကိုငျတှယျမှာလားဆိုတာ ကွညျ့ကွရအောငျပါ။
မန်စီးတီးနဲ့တွေ့ဆုံမယ့်ပွဲမှာ ဆိုးလ်ရှား ဘယ်လိုဗျူဟာတွေထုတ်သုံးပြီး ဘယ် သရဲနီတပ်သားတွေကို ရွေးချယ်ပွဲထုတ်လာမလဲ…?
ဒီနေ့ည အတွက်ကတော့ အင်္ဂလန်မှာ ရင်လှိုက်သည်းဖို ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လာပါမယ်။ ကာရာဘောင်ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်က နောက်တစ်ဆင့်တက်ရဖို့ အရေးကြီးသလို၊ မန်ချက်စတာ ဒါဘီပွဲစဉ်မှာ ဘယ်အသင်းက အနိုင်ယူနိုင်သလဲဆိုတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းကလည်း ပိုလို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဖလားလက်မဲ့ ဖြစ်နေတာ ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဆီမီး အဆင့်တွေသာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဆိုးလ်ရှား အတွက် ဒီနေ့ည ပွဲစဉ်က အရမ်းကို အရေးကြီးနေပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှား ရဲ့ တပ်မဟာမှာတော့ ပြစ်ဒဏ်ခံနေရတဲ့ ကာဗာနီနဲ့ ကျောဒဏ်ရာရနေတဲ့လင်ဒီလော့တို့ မပါဝင်နိုင်သလို ဂွာဒီယိုလာရဲ့ အသင်းဖက်မှာလည်း ကိုရိုနာ နှိပ်စက်လို့ အသင်းသားတွေ အထိနာနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လောလောဆယ် အနေအထားအရဆိုရင်တော့ ယူနိုက်တက်တို့ ကစားသမား အင်အားမှာ ရွေးချယ်စရာများစွာနဲ့ အားသာနေပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှား ခင်းကျင်းနိုင်တဲ့ ခန့်မှန်းကစားကွက်ကတော့ 4-2-3-1 ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဘီပွဲစဉ်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့ သရဲနီတွေကတော့ ဂိုးသမားနေရာမှာ ဟန်ဒါဆန်ကို ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ တခြားတပ်သားတွေကတော့ ဝမ်ဘစ်ဆာကာ၊ ဘိုင်လီ၊ မက်ဂွားယား၊ လုခ်ရှော၊ ဖရက်၊ တော်မီနေး၊ ရှက်ရ်ှဖို့၊ ဖာနန်ဒက်စ်၊ ပေါ့ဘာ၊ မာရှယ်တို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အခု ယူနိုက်တက် နှင့် မန်စီးတီးတို့ ကာရာ​ဘောင်ဖလား တွေ့ဆုံမှုဟာ (4) ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီး ၊ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ မနှစ်ဘောလုံးရာသီတုန်းက မန်စီးတီးအသင်းနှင့် Carabao Cup ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ် တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပကျော့ရလဒ်မှာ 1ဂိုး -3ဂိုး ရလဒ်နဲ့ ရှုံးပြီး၊ ဒုကျော့အ​ခေါက်မှာ​တော့ တစ်ဂိုး ၊ ဂိုးမရှိ နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စုစုပေါင်း 3ဂိုး -2ဂိုးရလဒ် ​ကြောင့် ယူနိုက်တက်တို့ပြိုင်ပွဲ က​နေထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ အခုနှစ် ကာရာ​ဘောင် ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကို ​တော့ တစ်ကျော့သာယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ မန်စီးတီးအသင်းနှင့်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲစုံ(3)ပွဲတွင် (2)ပွဲနိုင်ပြီး (1)ပွဲသရေကျခဲ့ပါတယ်။
မန်စီးတီးအသင်းဟာ ဂွာဒီယိုလာလက်ထက် ကာရာ​ဘောင်ဖလားပွဲစဉ် ကစားခဲ့တဲ့ 23 ပွဲမှာ 2ပွဲသာ ရှုံးခဲ့ဖူးပြီး အဲဒီ2ပွဲကို ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့သာရှုံး ခဲ့တာပါ။ အခုအချိန်မှာ​တော့ စပါးအသင်းက ဖိုင်နယ်စင်မြင့်ကို ကြို ​ရောက်​နေပါပြီ။ နည်းပြဆိုးလ်ရှား အ​နေနဲ့ ခုတစ်​ခေါက် ဒါဘီပွဲစဉ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်​ခေါက်လို ချစ်ကြည်​ရေးပွဲအသွင် ကိုင်တွယ်မှာလား၊ လက်​ဝှေ့ကြိုးဝိုင်းလို ကိုင်တွယ်မှာလားဆိုတာ ​ကြည့်ကြရ​အောင်ပါ။
ဖလားလုပှဲ တှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ပှဲတှမှောဆိုရငျ ဆိုလျရှားကိုမထေ့ားလိုကျပါ…